पातलो कैंची कसरी प्रयोग गर्ने पुरुष र महिलाका लागि कपालका साथ पातलो कपाल - जापान कैंची
✂️ वर्षको अन्त्य बिक्री ✂️
कपाल पातलो कैंची कसरी प्रयोग गर्ने?
जुन ओह द्वारा जुन 10, 2021 10 मिनेट पढ्ने
पातलो कैंची पुरुष र महिला कपालका लागि अत्यन्त उपयोगी उपकरण हो। यस लेखमा, म पातलो कैंचीको आनन्दको बारेमा धेरै कुरा गर्ने छैन, तर अधिक कसरी घर, स्कूल वा सैलुन र नाइक शपमा तिनीहरूलाई प्रयोग गर्ने.
पातलो कैंची प्रयोग गर्दा विचार गर्नुपर्ने त्यहाँ तीन मुख्य चीजहरू:
तपाईंको पातलो हुनुको कपालको प्रकार
पातलो सिंचीको प्रकार जुन तपाईं प्रयोग गरिरहनु भएको छ
कसरी पातलो कैंची समात्ने र प्रयोग गर्ने
हामी कसरी समात्छौं, कसरी घरमा पातलो कैंची प्रयोग गर्ने र पुरुष र महिलाहरूमा पातलो कैंची कसरी प्रयोग गर्ने भनेर।। कुनै समय बर्बाद नगरी, सुरु गरौं!
उत्तम ब्राउज गर्नुहोस् पातलो र बनावट कपाल यहाँ!
चरण १: कस्तो प्रकारको कपाल पातलो गर्दै हुनुहुन्छ?
पातलो कैंचीको उद्देश्य कपालको सेक्सनहरू हटाउनु हो, र यसले मद्दत गर्दछ:
तपाईंको कपाल बिभिन्न सेक्सन (लामो र छोटो क्षेत्रहरू) बीचको मिश्रण गर्नुहोस्।
कपालको बाक्लो खण्डबाट अधिक तौल हटाउने
तपाईं कपाल काट्ने कैंचीबाट सुरू गर्नुहुन्छ, त्यसपछि अन्त्यमा, पातलो कैंची तपाईं अन्तिम हेयरस्टाइल सुधार र सही गर्न मद्दतको लागि प्रयोग गर्नुहुन्छ।
यदि तपाईं घना र कपाल कपाल काट्दै हुनुहुन्छ भने, त्यसोभए तपाईंले निश्चित रूपमा अतिरिक्त तौल खाली गर्न पातलो कात्री प्रयोग गर्नु आवश्यक छ। जहाँसम्म, यदि तपाई कपाल पातलो छ भने, तब तपाईले पातलो कात्ती मात्र एकै गरी कपालको सेक्सन मिश्रण गर्न आवश्यक पर्दछ।
हाम्रो पूर्णको बारेमा थप पढ्नुहोस् कपाल पातलो कैंची गाईड!
चरण २: तपाइँ कस्तो प्रकारको पातलो कैंची प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ?
त्यहाँ पातलो कैंचीको विभिन्न प्रकारहरू छन् जुन तपाईं प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ, र प्रत्येक शैली तिनीहरूसँग कति दाँतहरू द्वारा परिभाषित गरिएको छ।
पातलो कैंचीको तीन मुख्य प्रकार समावेश:
२ to देखि teeth० दाँत पातलो: टेक्स्चराइजिंग र ब्लेन्डि।
To देखि १२ र to० देखि teeth० दाँत पातलो: पातलो जसले भारी तौल हटाउँछ
To देखि १२ दाँत पातलो: मिश्रण र परिष्करण
यो Texturizing र पातलो ब्लेन्डिंग र ब्लेन्डि and र परिष्कृत पातलो अधिक दाँतहरू छन्, सामान्यतया बीचमा v-आकारको किनारहरूका कम से कम स्थानको साथ, र कपाललाई हल्का दृश्य दिनको लागि मिसाइन्छ र सँगै मिसाउने क्षेत्रका लागि उत्तम हुन्छ।
परिस्थितिहरूको लागि जब तपाईं बाक्लो क्लस्टर वा बाक्लो कपाल, छ चम्पर पातलो हल्का महसुस गर्न र हेर्नको लागि कपालको भाग हटाउनमा उत्कृष्ट हुनुहुन्छ।
पातलो कैंचीको सबैभन्दा सामान्य प्रकार २ 24 भन्दा बढि दाँत हुन्छ र पुरुष र महिलाको लागि कपालको सेक्सन सेक्सनमा उत्कृष्ट हुन्छ।
यसको बारेमा थप पढ्नुहोस् यहाँ कपालका कपालका विभिन्न प्रकारहरू!
चरण:: पातलो कैंची कसरी समात्ने र प्रयोग गर्ने
अब हामी कपाल पातलो कैंची प्रयोग गर्ने र कसरी समात्ने भन्ने बारे जान्न सक्दछौं। हामी यसलाई छोटो र मीठो राख्नेछौं, ताकि तपाईं सुरु गर्न सक्नुहुनेछ!
यसको बारेमा थप पढ्नुहोस् केश कपालले कसरी आफ्नो कैंची समात्छ?
चरण 3.1.१: पातलो कैंची कसरी राख्ने
पातलो पातलो कैंची समात्ने चरणहरू:
तपाइँको औंठी औंला सानो प्वाल भित्र राख्नुहोस्
ठूला प्वालमा तपाईंको औंठा राख्नुहोस्
तपाईंको गुलाबी औंला ह्यान्डलको हुकमा आराम गरीरहेको छ
तपाईंको मध्य औंला र अनुक्रमणिका औंठी ह्यान्डलमा आराम गर्दै
त्यसो भए पातलो कैंची ब्लेडहरू खोल्न र बन्द गर्न तपाइँको थम्ब
तपाइँको कैंची समात्न उचित र उत्तम तरिका एक साधारण एक हो। यस विधिलाई पारम्परिक पश्चिमी पक भनिन्छ, र यो त्यस्तै तरिका हो जुन धेरै भन्दा बढि हो हेयरड्रेसरहरूले उनीहरूको कैंची समात्नेछ.
जब तपाईको कपाल पातलो कैंची समात्नुहुन्छ, यो निश्चित गर्नुहोस् कि दाँतको ब्लेड जहिले पनि माथिल्लो तर्फ हो।
चरण 3.2.२: पातलो कैंची कसरी प्रयोग गर्ने
कपाल पातलो कैंची प्रयोग ब्लेड खोल्न र बन्द गर्न को रूप मा सजिलो छ। तपाईं आफ्नो अनुक्रमणिका र मध्य औंला बीचको कपालको भाग लिन सक्नुहुन्छ, त्यसपछि तपाईंको औंला मुनिको कपाल पातलो। वैकल्पिक रूपमा, तपाईं कंघी, र पातलो कपाल कंघीको दाँत को माथि आउन सक्नुहुन्छ।
पातलो कैंची कपालको अन्तमा प्रयोग गरिन्छ, किनकि तिनीहरूले तपाईंलाई मिश्रण गर्न अनुमति दिन्छ, बनावट बनाउँनुहोस् र कुनै थप कपाल हटाउनुहोस्।
कपाल पातलो कैंची प्रयोग गर्ने सब भन्दा साधारण तरीका भनेको दुई भागमा कपाल मिसाउनु हो जुन सँगसँगै फरक लम्बाई हुन्छ। वैकल्पिक रूपमा, यदि तपाईंले घने कपालका घना क्षेत्रहरू याद गर्नुभयो भने, पातलो कैंची प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ हल्का महसुस र लुक प्रदान गर्न।
मिश्रण गर्न पातलो कैंची कसरी प्रयोग गर्ने
तपाईंको कपाल काट्ने बित्तिकै, तपाईंको कपाल सुकाउनुहोस् र पातलो कात्तीलाई आफ्नो कार्यको साथ समात्नुहोस्minaएनटी हात।
या त तपाइँ अनुक्रमणिका र मध्य औंला वा कपाल गर्न कपाल जो दुई भागहरु को बीच तपाइँ मिश्रण गर्न को लागी प्रयोग गर्नुहोस्।
पातलो स्किसर ब्लेडहरू खोल्नुहोस् र एउटा चिल्लो गतिमा यसलाई कपालको बीचमा बन्द गर्नुहोस्।
यस प्रक्रियालाई बीच बिन्दुमा दोहोर्याउनुहोस् जहाँ दुई कपालका दुई भागहरू मिल्दछन्।
पातलो कैंची कसरी गाढा कपाल र बनावट हटाउन प्रयोग गर्ने
कि त बाल कटाईको अन्त्यमा वा सुरूवातमा, निश्चित गर्नुहोस् कि कपाल सिधा तलतिर जोडिएको छ। कुनै गाँठ वा कपालको कपालको भाग हुनु हुँदैन।
तपाई पातलो हुन चाहानु भएको केशको खण्ड पत्ता लगाउनुहोस् र तपाईले आफ्नो सूचकांक र मध्य औंलाले कपाल समात्न वा कंघी प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
पातलो कैंचीलाई तपाईंको कार्यमा समात्नुहोस्minaएनटी हात र ब्लेड खोल्न। तपाइँको औंलाहरू वा कंघीको माथि एक वा दुई इन्च कैंची राख्नुहोस्, ताकि तपाइँले समातेको सेक्शनबाट केही टाढा पातलो गर्दै हुनुहुन्छ।
एक चिकनी ग्लाइडिंग गतिमा, खुला ब्लेडलाई कपालमा सार्नुहोस् र बन्द गर्नुहोस्। ग्लाईडिंग मोशन जस्तो छ कि तपाईं कसरी आफ्नो कपाल ब्रश वा कंघी गर्नुहुन्छ।
पातलो देखिरहेको मोटो कपालको पूरै सेक्सनमा फेरि दोहोर्याउनुहोस्।
चरण 3.3: घरमा पातलो कैंची कसरी प्रयोग गर्ने
घरमा पातलो कात्ती प्रयोग गर्ने राम्रो उपाय हुन सक्छ यदि तपाईं आफ्नो कपाल कायम राख्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने, वा अरू कसैलाई कपाल काट्न।
यदि तपाईं एक शुरुआती हुनुहुन्छ भने, हामी तपाईंको चाहना भन्दा कम पातलो पार्ने सल्लाह दिन्छौं किनकि धेरै कपाल हटाउँदा कुनै पनि क्षतिलाई मर्मत गर्न गाह्रो हुन्छ।
घरमा पातलो कपालको सब भन्दा सजिलो र सजिलो तरीका तपाईंको कपालको अन्त्यमा दुई भागहरूलाई मिसाएर हो। तपाईंको आफ्नै कपाल पातलो गर्न गाह्रो हुन सक्छ, त्यसैले ऐना प्रयोग गरेर वा घरमा कसैलाई सहयोगको लागि सोध्नुहोस्।
यसको बारेमा थप पढ्नुहोस् घरमा कपाल कटाई को लागी उत्तम कैंची!
चरण 3.4: कसरी महिला कपालमा पातलो कैंची प्रयोग गर्ने
ड्यानाह रे, कपाल स्टाइलिस्ट YouTuber, एक लामो भिडियो ट्यूटोरियल प्रदान गर्दछ कसरी पातलो कात्तिको प्रयोग गर्नका लागि लामो कपालमा तौल हटाउनको लागि।
चरण :.: पुरुषहरूको कपालमा पातलो कैंची कसरी प्रयोग गर्ने
पज, एक हेयरड्रेसिंग YouTuber, कसरी पातलो छोटो कपाल को उपयोग गर्ने मा एक महान साधारण विवरण प्रदान गर्दछ।
निष्कर्ष: म कपाल पातलो कैंची कसरी प्रयोग गर्ने?
पातलो कपालहरू एकदम बहुमुखी हुन्छन् र धेरै दाँत सेटअपहरू आउँदछन्, र तपाईं कम्तिमा पनि to० - %०% बीचमा काट्न सक्नुहुन्छ ग्राहकको कपालको केवल एक देखि दुई कटौतीको साथ। पातलो कैंचीले कुनै पनि हेयरकटमा अधिक प्राकृतिक मिश्रण थप्न सक्छ वा तपाईंको उत्कृष्ट कृतिको समग्र स्वादलाई सुधार गर्न बनावटको स्तर थप गर्न सक्दछ।
उत्तम ब्राउज गर्नुहोस् काटिएको र पातलो कपाल कैंची सेटहरू!
हामीले विज्ञहरूसँग कुराकानी ग .्यौं
हामी जूनसँग, मेलबर्नमा एक सैलून मालिक, कपालका लागि कपाल बनाउने उत्तम टेन्चरिisingको बारेमा कुरा गर्यौं:
"मैले पत्ता लगाए कि यो कैंची काट्ने भन्दा चिल्लो काट्ने पातलो पाउन सधैं गाह्रो थियो," उनले थोरै विचार गरे पछि भने। "गुणस्तर फरकको बारेमा बढी सिकिसके पछि, मैले हेरी Jaguar, जुनटेत्सु र Yasaka प्रिज्म दाँत र उच्च-गुणवत्ता इस्पात को कारण उत्तम विकल्पहरू उपलब्ध छन्। तपाईं एक $ १ pair० जोडी काट्ने क्यान्सर किन्न सक्नुहुनेछ र तिनीहरूसँग खुशी हुनुहोस्, तर तपाईं २०० डॉलरको जोडी पातलोको खरीद गर्न चाहानुहुन्छ यदि तपाईं स्मोटेस्ट कट्स चाहानुहुन्छ भने। "
मलाई कति दाँत चाहिन्छ र किन?
यदि तपाईं हाम्रो साइटमा केहि समयको लागि हुनुहुन्छ भने, तपाईंले दाँत नम्बरहरूको सबै भिन्नताहरूको साथ पातलो कैंची देख्नुहुने थियो। औंठाको सामान्य नियमको रूपमा, २ 25 र माथिको टेक्स्चरि and र ब्लेन्डिंगका लागि हो, जबकि, १ 15 र मुनिको भाग हटाउनेहरू हुन्!
बाक्लो कपाल ह्यान्डल गर्ने बेला, फराकिलो खालका साथ कम दाँतहरूले तपाईंको काम पूर्ण सजिलो बनाउँदछ।भागहटाउनेहरू घुमाउरो कपालका लागि उत्तम हुन्छन्, जससँग सामान्य क्यान्सरहरू स struggle्घर्ष गर्दछन्, नामले सुझाव दिए जस्तै यी कपालहरूले कपालको ठूलो भाग एकैचोटि बाहिर निकाल्न सक्दछ (~० - %०%)। यद्यपि, एक महत्त्वपूर्ण सावधान, हिस्सा कैंची प्रयोग गर्न गाह्रो हुन सक्छ र यदि दुरुपयोग गरियो भने, कटौतीमा प्वालहरू छोड्न सक्छ।
पातलो कात्तिकाहरूबारे अब हामी नाइट्टी-ग्रिट्टीको साथ काम गर्दैछौं। हामी तिनीहरूलाई कसरी प्रयोग गर्न सक्छौं?
कपाल पातलो कैंची प्रयोग गर्न Ste चरणहरू
चरण १. कपालको माध्यमबाट ब्रश / कंघी
जबकि यो रकेट विज्ञान होईन, यो कौंच र कम्बल गर्न आवश्यक छ जब सम्म यो अप्रशोधित र चिल्लो हुँदैन। थप रूपमा, सुक्खा कपालमा पातलो कात्ती प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ किनकि भिजेको कपालले सँगै टाँसिरहन्छ, यसैले तपाईं प्रत्येक कटौतीलाई कति हटाउनुहुन्छ भन्ने स्थिरता कम गर्दछ। यदि तपाइँ काम गरिरहनु भएको कपाल स्वभावले घुमाउरो छ भने, बनावट कपाल प्रयोग गर्ने प्रयास गर्नु अघि सीधा बनाउने प्रयास गर्नुहोस्।
चरण २ दाँत र ब्लेड बीचको कपाल
तपाईंको कपालहरू हातमा लिएर ब्लेडलाई छुट्ट्याउनुहोस् र कपालको सानो भाग दाँत र काट्ने ब्लेडको बीचमा राख्नुहोस्। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको कपालहरू स्क्याल्प र तपाईंको औंलाहरूको सतह माथि करीव तीन इन्च भन्दा माथी छ! जरा वा ग्राहकको कपालको टिप्समा कपाल कहिले पनि प्रयोग नगर्नुहोस्।
चरण 3. 45 XNUMX-डिग्री ए Ang्गल र सानो सानो स्निप्स
एकचोटि कपाल तपाईंको पातलो कपालको बीचमा सुस्त हुन्छ, sc 45 डिग्री ए angle्गलमा नाँगीमा तपाईंको कैसर ब्लेडहरू समात्नुहोस्, र केही थप थोक हटाउन सानो सानो स्निपहरू बनाउनुहोस्। प्रत्येक कटाको साथ अतिरिक्त कपाल कम्बल गर्न सुनिश्चित गर्नुहोस्, तपाईंलाई तपाईंको प्रगति निगरानी गर्न र ज्यादै धेरै नहटाइएको निश्चित गर्न।
FAQ - कपाल पातलो कैंची कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारे सामान्य प्रश्नहरू
पातलो कैंचीको सम्बन्धमा हामी प्राय: सोधिने प्रश्नहरूको एक जोडीलाई तल हेर्नुहोस्। त्यसोभए तपाईले सोधेका कुनै पनि प्रश्न हामीसँग सम्पर्क गर्न नहिचकिचाउनुहोस्, किनभने हामीसँग तपाईको लागि उत्तर हुन्छ।
कस्तो प्रकारको पातलो कतराहरू मैले किन्नु पर्छ?
केही व्यक्ति कडाईका साथ धारणा राख्छन् कि पातलो र बनावटमा क्वालिटी स्टिलको प्रयोग काट्ने सिंची प्रयोग गर्नु भन्दा बढी आवश्यक हुन्छ।
यद्यपि तपाईं पातलो वा टेक्सचराइजिंग शियर प्रयोग गर्नुहुन्न जति तपाईंको काट्ने कपालहरू, तर कैंचीलाई बेकाम बनाउनको लागि लिने सबै एउटा टुक्रिएको दाँत हो।
उत्कृष्ट गुणस्तरको इस्पात पातलो कैंचीले कपाल तान्न वा खिच्न असम्भव छ किनकि उनीहरू कपालबाट भएर सर्छन्।
पातलो कात्रो भिजेको वा सुक्खा कपाल मा प्रयोग गर्नु पर्छ?
सामान्यतया, यसलाई सुक्खा कपालमा प्रयोग गर्नु उत्तम हुन्छ, तर तिनीहरूलाई भिजेको कपालमा प्रयोग गर्नु अझै ठिकै छ।
यदि ती भिजेको कपालमा प्रयोग भइरहेको छ भने, तपाईंले धेरै होशियार हुनु आवश्यक छ ताकि तपाईंले ती अधिक प्रयोग गर्नुहुन्न।
किनकि कपाल तुरुन्तै सुक्दछ किनभने शैली पूर्ण रूपमा बिग्रिएको हुन सक्छ, र त्यसैले यो सुक्खा कपालमा तिनीहरूलाई प्रयोग गर्न बेट्स छ।
के पातलो कपालहरु तपाईको कपाल को लागी खराब छ?
एक अनुभवी हेयरड्रेसरको हातमा, पातलो कपालहरू खराब हुनुदेखि धेरै टाढा छन्।
तपाईं मात्र मुद्दाहरूको अनुभव गर्न थाल्नुहुन्छ जब कपाल ठीकसँग प्रयोग हुँदैन वा कपाल पातलो पातलोको लागि उपयुक्त हुँदैन।
उदाहरण को लागी, केहि घुमाउरो कपाललाई पातलो हुँदा पातहरू बनाउन मानक काट्ने कतराहरूको प्रयोग आवश्यक पर्दछ।
पातलो कात्रो प्रयोग गर्न ठीक छ?
पातलो कपालहरूले कपाल काट्ने धेरै शैलीहरू सुधार गर्दछ। तिनीहरूले भोल्युम थप्न र भारी काट्ने लाइनहरू फेड गर्न अनावश्यक थोक लिन सक्छन्।
पातलो कात्री दुबै लिंगहरूमा प्रयोग गरिन्छ, ती सबै कुराको कपालको प्रकार र व्यक्ति (पुरुष वा महिला) चाहने शैली को हुन्छ।
पातलो कैंची प्रयोग गर्दा तपाईको कपाललाई के हुन्छ?
पातलो कैंचीमा दाँतको कारणले, केही कपालको काखाहरू काटिन्छन् जबकि अन्य पूर्ण लम्बाईमा रहन्छन्।
पातलो कपालले कपाललाई कपाल दिन्छ कपालबाट केहि थोक केही हटाउन को लागी कुनै लंबाई को हानी बिना।
पातलो कात्राको साथ तपाईं कुन काट्ने सर्तहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ?
स्लाइरि,, पोइन्ट, अंकिंग वा केहि सर्तहरू हुन् जुन पातलो कात्रीको प्रयोगसँग सम्बन्धित छ। पोइन्ट कटि is तब हुन्छ जब तपाईं कपाललाई कपालमा आफ्नो कटाउनका लागि दर्साउनुहुन्छ। यो नरम तहहरू गठन गर्न र घुमाउरो कपाल नरम र बनावट स्वरूप दिन प्रयोग गरिन्छ।
स्लाइरि,, पोइन्ट कटि to भन्दा फरक यो एक विधि हो जसमा कात्ती कपालको लागि अलि खुला राखिएको हुन्छ र त्यसपछि कपालको लम्बाइबाट टाढा स्ल्याड हुन्छ। यो सिधा र नरम वेभ कपालमा उत्तम प्रयोग गरिन्छ।
नचिंग भनेको बिन्दु काट्ने जस्ता हुन्छ, केवल भिन्नता यो छोटो कपालमा प्रयोग गरिन्छ। यस विधिका लागि उपयुक्त हुने उत्तम प्रकारको कटाहरू या त पिक्सी कटौती वा पुरुषका कटाहरू हुन्। यसले कपाललाई धेरै बनावट स्वरूप दिन्छ।
पातलो कपाललाई म कपाल पातलो पार्न कसरी प्रयोग गर्न सक्छु?
भोल्युम सुधार गर्न कपाललाई भागमा काटिन्छ र कपालको तौल हटाइन्छ।
कुनै पनि अवसरमा तपाईंले मुकुट / हेलो क्षेत्रबाट कपाल पातलो गर्न सुरु गर्नु हुँदैन, आफ्नो टाउकोको अगाडि सुरु गर्नुहोस् जहाँ कपाल ठाडो स्थितिमा छ, यदि होईन भने तपाईं काटिएको कपाल चिपिएको देख्नुहुनेछ।
यसलाई बिस्तारै गर्नुहोस् र फेरी कति हटाईन्छ भनेर निश्चित गर्न कुनै ढीला कपाल बाहिर कंघी गरेर तपाईंको प्रगति जाँच गर्नुहोस्। यो धेरै कटौती गर्न सम्भव छ तर अन्य मार्गमा जानु असम्भव छ।
के कपाल पातलो हुनुको कारण के यसको मोटो कपाल फेरि बढ्छ?
केहि व्यक्तिहरूमा यो विश्वास छ कि कपाल पातलो पार्नु भनेको यसलाई गाढा बनाउने एक तरीका हो।
तर कपाल हुनुको प्रक्रिया तब हुन्छ जब कपाल कपाल कटाई बीच बढ्दो हुन्छ र अतिरिक्त तौलले यसलाई गाढा देखाउँदछ। त्यसो भए पातलो हुनुले कपाल बाक्लो हुँदैन वा कपालको मात्रा बढाउँदैन, कपाल फेरि उस्तै हुन्छ।
पातलो कात्रो म कति पटक प्रयोग गर्न सक्छु?
यो कपालको प्रकारमा निर्भर हुन्छ। त्यहाँ कपाल प्रकारहरू छन् कि तपाईले कहिल्यै पातलो कपालहरू प्रयोग गर्नु हुँदैन, धेरै पातलो कपाल जस्तै।
धेरै पातलो कपालमा पातलो कपालको प्रयोगले समस्यालाई अझ नराम्रो बनाउन सक्छ जसको परिणामस्वरूप एयरलाइन्समा विभिन्न लम्बाइहरू हुन सक्छ।
केही घुमाउरो र कामुक कपालले कपाल पातलोबाट बच्नु पर्छ र स्ट्यान्डर्ड कतरिंग कतराहरूसँगै बसोबास गर्नुपर्दछ किनभने कात्तिक पातलोको साथ यसले प्रबन्ध गर्न गाह्रो बनाउँछ।
अर्कोतर्फ, कपाल धेरै बाक्लो कपाल पातलो कपालमा हुने सबै कपालमा केही अनावश्यक तौल लिन र भोल्युम बढाउन प्रयोग गर्न सक्दछ।
टेन्चराइजिंग कतराहरूबाट पातलो कपाललाई के फरक पार्दछ?
एक एमेच्योर कपाल कपाल सजिलै पातलो कपाल र बनावट कतराहरू मिश्रण गर्दछ किनभने तिनीहरूको डरलाग्दो सानो दाँत थियो।
यद्यपि पातलो र टेक्साइराइजरले कपाल हटाउँदछ, तर तिनीहरूको अनौंठो रोजगारहरू छन्। यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंलाई दुबै बीचको भिन्नता थाहा छ त्यसैले तपाईंलाई ग्राहकलाई उत्तम परिणाम दिन सक्षम पार्न कुन क्यान्सर प्रयोग गर्ने भन्ने बारे तपाईंलाई थाहा छ।
पातलो कपालका २ around देखि 28० दाँत हुन्छन् र कपालबाट बढी तौल हटाउनका साथै काटिएको कैंचीले छोडेको सीमांकन रेखालाई मिसाउनका लागि हो।
तिनीहरूले दृश्य बनावट वा कपालमा भोल्युम बनाउँदैनन्। ती सब बाल कटाईबाट नरम र कुटिलता हटाउन प्रयोग गरिन्छ।
टेक्सचराइजिंग क्यायरहरूको सानो संख्या हुन्छ तर उनीहरूको बिचमा अधिक ठाँउ भएको फराकिलो दाँतको कारणले गर्दा उनीहरूले कपालको ठूलो भाग लिन्छन् र तहहरूको माध्यमबाट खण्ड र बनावट उत्पादन गर्दछन्।
त्यहाँ दुई प्रकारको टेक्सराइजिंग क्यायरहरू, आक्रामक एक र सूक्ष्म एक। आक्रामक टेक्स्चराइजिंग क्यायरमा कम्तिमा पाँच दाँत हुन्छन् जसले गर्दा उनीहरूले कपालको महत्त्वपूर्ण खाच हटाए।
पातलो र बनावट कतराहरू नाटकीय हुन सक्ने भन्दा अद्वितीय देखिन्छ।
अन्त्यमा यो सबै तपाइँ कुन चाहिएको भन्दा बढी सहज महसुस गर्नुहुन्छ भन्नेमा निर्भर गर्दछ र केश काट्ने शैली वा शैलीको प्रकार जुन तपाइँ सिर्जना गर्न खोज्नु भएको छ।
सँधै केश कपालको नियम सम्झनुहोस् जुन "कम बढी हुन्छ" भन्छ। थोरैसँग सुरु गर्नुहोस् र यदि आवश्यक परेमा तपाईं अधिक गर्न सक्नुहुन्छ।
उत्तम जापानी शैली पातलो कैंची | जापानसिसिर्स.कस.उउ यहाँ पढ्नुहोस्
पातलो र Texturising कैंची क्रेता गाइड यहाँ ScissorHub.com.au मा पढ्नुहोस्
कपाल पातलो कैंची कसरी युएसए नाइकशप वा सैलुनमा प्रयोग गर्ने यहाँ JPscissors.com मा पढ्नुहोस्
पातलो कैंचीको साथ हेयरस्टाइल विकासमा परिवर्तन यहाँ DBPia.co.kr मा पढ्नुहोस्
पातलो कैंचीको प्रभाव | यहाँ IOPSज्ञान.iop.org मा पढ्नुहोस्
रक र रोल हजुरबुबा
मलाई केहि मानिसहरु थाहा छ जो घरमा कपाल काट्न मन पराउँछन् तर मलाई थाहा थिएन कि यो उनीहरुको लागी कपाल पातलो गर्ने कैंची को उपयोग को लागी उपयोगी थियो। मैले सोचे कि यो एक दैनिक जो को skillsets बाहिर हुनेछ। यो भिडियो पोस्ट गर्नुभएकोमा धन्यवाद। मलाई लाग्छ कि केहि मानिसहरु जो भिडियो हेर्छन् कपाल काट्ने कैंची को एक जोडी कपाल पातलो कैंची थप्न सक्छन्।
यो हास्यास्पद छ किनकि मैले कैंची को यस प्रकार को बारे मा कहिल्यै सिकेँ जब म 30 बर्ष पहिले ब्यूटी स्कूल मा थिएँ। मलाई यकीन छैन कि यदि यो मेरो स्थान को लागी तल थियो वा उनीहरु मात्र त्यति लोकप्रिय थिएनन्। मैले भर्खरै मेरो कपाल काटें र एक जवान मान्छे जो यी र २ अन्य प्रकार को उपयोग गरीरहेको थियो द्वारा स्टाइल। उनले एक शानदार काम पनि गरे! मँ उनीहरुलाई अनुसन्धान गरी रहेको छु किनकि म उनीहरुलाई आफैं कसरी प्रयोग गर्ने भनेर जान्न चाहन्छु। जानकारी को लागी धेरै धेरै धन्यवाद!
मलाई आशा छ कि कस्मेटोलोजी स्कूलहरूले सम्भावित कपाललाई कपाल पातलो कैंची कसरी प्रयोग गर्ने भनेर सिकाउँदछन्। यदि तपाईं कुर्सीमा बसिरहनुभएको छ र कसैले कसैलाई कैंचीले गल्ती गरेको देख्नुहुन्छ भने, यो कुद्दा दगुर्ने समय आइसकेको छ। LOL